Calanka Soomaaliyeed Cunsuriyad Ma Yaqaano Cidna Gooni Uma Laha… |
Ismaaciil Ibraahim Hassan — May 15, 2019
Ceeb ka weyn majirto in calankaagii laga taagay deegaankaaga aad hadana maanta sidii cunsurnimo kula kacdo qof xidhan! Ceeb ka weyn majirto in calankaagii aad heeryadii gumeysiga kaga xorowday maantana aad u aqoonsato mid dhiigaaga lagu qubay!
Aanku bilaabo maqaalkaygan waxaan kaga warami doonnaa si kooban taariikhda Calanka Soomaaliyeed, iyo cida sameysay. Sidoo kale calanku ma wuxuu gooni u yahay hal gobol, mise wuxuu ka dhexeeyaa Soomaaliweyn?
Is weydii haddaad tahay wadani dhab ah oo Soomaalinimada kuweyn….?
Calankan buluugga ah ee xiddigta shanta gees ee caddaanka dhexda kaga qotonsan waxaa sameeyey Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa halgamaagii hindisay suureynta iyo midabada cajiibka leh ku hal abuursan maradan calanka ah.
Halgamaa Maxamed Cawaale Liibaan oo lagu xasuusto innuu ahaa nin Soomaalinimada maqaam wanaagsan kaga taagneyd hadana maxaad ka xasuusataa taariikhda rasmiga ah ee calan Soomaaliyeed la sameeyay….?
Markii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed la sameeyey waxay ahayd bishii october 1954tii.
Hadaba calanka Soomaaliyeed midabadiisu maxay muujiyaan?
Calanka soomaaliyeed wuxuu ka koobanyahay labo midab oo ah caddaan iyo buluug.
Calanka Soomaaliyeed wuxuu ka koobanyahay labo midab oo ah caddaan iyo buluug waana calanka ugu quruxda badan adduunka, marka loo eego dalal badan oo isku dayay in ay la tartamaan soona saartaan calan la mid ah quruxdiisa waana calanka ina cawaale maskaxdiisa ka keenay, calanka Soomaaliyeed ee buluugga ah xiddigta caddaankana dhexda kaga qotonsan wuxuu ka tarjumayaa dhammaan deegaanada iyo dhulka Soomaalidu degto oo laysku yidhaahdo shanta Soomaaliyeed waana astaanta qofnimo ee lagu yaqaan markuu qofku xirto lagu garto.
Hadaba Maxamed Cawaale Liibaan Calanka Soomaaliyeed ma wuxuu u sameeyey gobol ama qabiil gaara mise wuxuu u hindisay Soomaaliweyn?
Sida ka muuqato heybadda calanka Soomaaliyeed ma ahan calan ay leeyihiin gobol ama qabiil gaara taasna waxay ku tusineysaa astaan guud ahaaneed oo ka wada dhaxaysa dadka Soomaalida ah.
Waxaase ceeb noqotay kadib markii gobol kamida Soomaaliya laga mamnuuco calankii Soomaaliyeed………?
Hargeysa, waa magaaladii ugu horeysay ee laga taagay calankan buluugga ah maantana waa magaalo calankeedii laga dhigay mid sun ah……hadaba asbaabtaasi maxay tahay?
Waxa keenaya in Hargeysa laga mamnuuco calankaasi waxa ay tahay inkastoo reer Hargeysa oo dhan aysan diidanayn calankan balse waa qaar ka mida kuwa talada maamulka haya, oo calankaan u sawirtay markey arkaan duqeyntii 1988dii diyaaradihii kacaanka ku rusheeyay deegaano badan oo gobolada waqooyi ee dalka ka mid ahaa, islamarkaana calankii Soomaaliyeed ku xardhan.
Waxayna col u goosteen calankan iyo cidii xidhanba ayagoo markaa ku xasuusanaya dhibaatadii kacaanka ku fuliyay deegaanadooda, balse yaa isweeydiiyay in calankan uusan ka tarjumin kaliya kacaankii duqeeyay waagaas uu yahay calan hortii jidhay…?
Oo uusan calanku mid ina Siyaad Barre sameystay ahayn hase ahaatee uu yahay kii ina Cawaale liibaan hindisay.
Muhiimada qormadeydan ayaa igu dhiiri galisay inaan qalinka u qaato, Calankan Soomaaliyeed innuusan ahayn calan goboleed, inuusan ahayn calan jabhadeed, inuusan ahayn calan qabiileed, inuusan ahayn calan kaligii talis ah uu leeyahay, balse uu yahay Calan kawada dhexeeya ummadda Afka Soomaaliga ku hadasha ee ku nool geeska Afrika iyo adduun weynaha.
Marbaa dhici doonta calankan oo si xoriyad lagaga taagay gobolada shanta Soomaaliyeed Insh’Allah. Marbaa dhici doonta calankan in dunida ay tidhaahdo waa astaanta Soomaalinimada iyo israaca isirka ina Samaale Maxamed.
Ugu dambeyn waxaan leeyahay diidayo calankaaga darxumaa kuu dambeyso, diidayo calankaagi daciifnimay kuu tahay, diidayo calankaagii waa kuu doqonimo iyo gudcur.
Calanyohow Calanyohow buluugee
Xidigtaa xidigtaa caddaankee
Dhexda kaga cabbirantee
Cizigii xorriyadeed lixdankii ku caamboxoo
Insha allaahu marbaad curanoo
Rabbi soo celi cududaadoo
Sida curudiyo ubax curdinaad carfi doontaa
Tags: Calanka Soomaaliyeed Cunsuriyad Ma Yaqaano Cidna Gooni Uma Laha...
Next post Mirqaanka Ma Miyir Beel Baa Laga Dhaxlaa?
Previous post Dheecaanka Ku Jira Hooyada Uurka Leh & Shaqooyinka uu Qabto